Indlu esemaphandleni enomtsalane yaseHighland kumzila we-NC500 - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni enomtsalane yaseHighland kumzila we-NC500
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFrances
Indlu esemaphandleni entle, ekwindawo entle esemaphandleni eScottish Highlands ekwiNorth Coast 500.
Ukuhlala ukuya kutsho kubantu abayi-5, iCroft 228 idibanisa ubutofotofo kunye nezinto zale mihla zokuhombisa, kwaye yindawo efanelekileyo yokubuka indawo yasekuhlaleni uze wonwabele ukuba phandle.
Indlu esemaphandleni, eyahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2013, inamagumbi okulala ayi-3 ahonjiswe kakuhle (ayi-2 aneebhedi ezimbini kunye negumbi lokulala elingasemva elinebhedi enye), kwaye inokuhlala abantu abayi-5.
Ngaphantsi komgangatho, igumbi lokuhlala elinomtsalane lineesofa eziyi-2, iTV enkulu ene-Freeview kunye ne-DVD player. Sikwabonelela nangemidlalo, iifilimu kunye neencwadi onokukhetha kuzo ngexesha lokuhlala kwakho, kunye neencwadi ezibonisa iindawo kunye neemephu ukukunceda ufumane indlela.
Ukutya kwale mihla- ekhitshini/kwigumbi lokutyela inayo yonke into oyidingayo kwindawo yakho yokuhlala, kuquka:
-I-Crockery, iiglasi, amacephe
-iipani -Electric hob and oven
-Imicrowave Indlu esemaphandleni ineshawa kodwa ayinayo ibhafu.
Sinikisa ngebhedi nesitulo sokutyisela abantwana.
Amaxabiso ethu aquka:
-Fresh bedlinen kunye neetawuli zokuhlamba
-Ukufudumeza, amanzi ashushu nombane.
I-Croft 228 ihleli kufutshane neenyawo zikaBen Loyal, ‘iKumkanikazi Yeentaba zaseScotland'. Le ndlu isemizuzwini nje embalwa xa uhamba ngeenyawo ukusuka embindini welali, equka iihotele eziyi-2 kunye neebhari zikawonke-wonke (ukutya), ibhanki, iivenkile zobugcisa, iivenkile eziyi-2 ezifumaneka lula kunye nesikhululo sePetroli. ITesco ikunika ukutya kwilali ukuze ukwazi nokuthenga izinto ngendlela ofuna ngayo.
INDAWO YASEKUHLALENI- INTO OMELE UYIBONE uze uyenze
I-Tonkgue yintsapho ephithizelayo enezinto ezininzi onokuzibona uze uzenze. Ezinye zezinto ezininzi ezintle esinazo ziquka:
-Ukukhwela iHorse -Salmon fishing
-Ukuhamba ngeenyawo (iintaba eziyi-2 kufutshane, kuquka iBen Hope-mainland yaseScotland esemntla weMunro)
-Ukubukela ii-Bird -iilwandle zase-Pristine -Iindlela zokuhamba ngebhayisekile neendlela zaselunxwemeni
-iStalking -Inethiwekhi yomjikelo welizwe -Geocaching -ihotele eziphumeleleyo
- I-North Coast 500 indlela yokuqhuba.
-Izifundo zeGolf -Imiqolomba -I-Zipline phezu kolwandle
Ipuli yokuqubha, i-jacuzzi kunye
lwe-Boat -iindawo ezenza utywala
Indawo yasekuhlaleni idume ngobuhle bayo bendalo obungathethekiyo kwaye yenye yeendawo zeScottish Natural ‘, eneendawo ezintle kunye nezinye zezona ndawo zintle eScotland.
Kukho iihotele ezininzi ezintle kule ndawo ibe siza kukuthumelela iinkcukacha xa ubhukisha okanye ubuza.
Hi, my name is Frances and I work in Community Development covering the north of Scotland.
I'm a keen traveller, born and grew up in local area so am full of local knowledge and recommendations for things to see and do.
Having lived next door to Croft 228 for over 30 years, we bought the cottage in 2012, spending 6 months fully restoring it, keeping the beautiful traditional features while modernising the space.
Our family and previous guests have loved staying at Croft 228, and we hope to welcome you here soon.
I'm a keen traveller, born and grew up in local area so am full of local kn…
Sifuna ukuba wonwabe ngokuhlala kwakho eCroft 228, ngoko nceda uzive ukhululekile ukuba uqhagamshelane nathi nge-imeyile ngayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo ngaphambi kokuba ufike.
Sakuba siyiqinisekisile indawo oyibhukishileyo, siza kukuthumelela i-imeyile enenkcazelo eluncedo, indlela yokuqhuba, kunye namacebiso ethu ukuze uhlale kamnandi apha eNorth West Highlands.
Xa sele ufikile, siyakuvuyela ukwabelana ngenkcazelo yasekuhlaleni kunye nembali, kunye namacebiso endlela yokuchitha ixesha lakho apha. Siphila nje kufutshane ukuze sikwazi ukukunceda kangangoko ufuna. Okanye, siza kukuvuyela ukukushiya unoxolo ukuba ungathanda ukuphumla uze wonwabele indawo yasekuhlaleni ngexesha lakho. Ngokuqinisekileyo uza kuba nezitshixo zakho kwindlu esemaphandleni ukuze ukwazi ukuza uze uhambe ngendlela othanda ngayo.
Sifuna ukuba wonwabe ngokuhlala kwakho eCroft 228, ngoko nceda uzive ukhululekile ukuba uqhagamshelane nathi nge-imeyile ngayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo ngaphambi kokuba ufik…